Nageria iyo Somalia maxaa laga Ansixiyay?.
Wednesday January 08, 2020 - 15:29:48 in Wararka by Mogadishu Times
Nageria maxaa Faqri ka dhigay? Somaliya Halkaa Ceel oo kaliya, ma Badbaadi karnaa? Ceelkee?. Nageria Masuuliyiin hore ayaa Ansixisay Sharci shidaal oo loo soo diyaariyay. waa wadanka tira ahaan Africa ugu Dad badan, lehna "Human Resource&quo
Nageria maxaa Faqri ka dhigay? Somaliya Halkaa Ceel oo kaliya, ma Badbaadi karnaa? Ceelkee?. Nageria Masuuliyiin hore ayaa Ansixisay Sharci shidaal oo loo soo diyaariyay. waa wadanka tira ahaan Africa ugu Dad badan, lehna "Human Resource" tayo leh. dhinaca Beerahana wax soo Saar fiican leh.( in kasta oo la igu yiri: Hotelkii aan deganaa Yaanyada waxaa laga keenaa yurub,sharciga Hotelada Qaar ayaa sidaa ah)
Shidaalka 40% waxaa soo saara Shirkadda "Shells” oo Anagaba Heshiis nala gasahy Sannadkii hore. wadanka waxaa ka mamnuuc ah in laga dhiso warshada Shidaalka sifeeyso. Shidaalka raqiis ayaa looga gataa, Dibadda ayaa lagu soo sifeeyaa, kadibna dib ayaa loogu soo celiyaa oo Balaayiin Dollar ey ku bixiyaan. weliba shirkadahaa waxaa loo sameeyay Cashuur dhaaf aan caadi aheyn.
Dabaqada sare waxaa ey ku noolyihiin, halka aan taaganahay. (F.S:3aad), Dabaqadaa waxaa hogaaminayo Rag uu ka mid yahay, Mr. Aliko Dangoto oo ah Ninka Nagerianka ah ee Africa oo dhan ugu Taagirsan. Dabaqada hoose ee isla Magaalada (F.S: 4 & 5aad).
weey adagtahay in siriqdaa Mar hore ey Masuuliyiintu saxiixeen si fudud looga baxo, sida ey ii sheegeen Madaxweynihii hore ee Nageria Mr.Obasanjo iyo Gudoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe Mr.Sunusi.( F.S: 6 & 7aad)….Laakin Somalia weli fursad ayaa jirto.
FG:Arragtidaada xur ayaad u tahay, wixii iga khaldan iga sax,wixii dhimanna ku dar.